ဘယ်လောက်ကြာကြာပိတ်မှာလဲ …….သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ရှည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဘယ်လောက်ကြာကြာပိတ်မှာလဲ …….သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ရှည်
ဘယ်လောက်ကြာကြာပိတ်မှာလဲ …….သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ရှည်
Posted by etone on Mar 31, 2011 in Opinions & Discussion | 22 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်းကပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သော နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်တိုင်း အစိုးရရုံးများ ၊ ပုဂ္ဂလိက ရုံးများ ၊ စက်ရုံများ လက်ခံလိုက်နာကာ ရက်ရှည် နှစ်သစ်ကူး ပိတ်ရက် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြရပါသည် ။
သို့ရာတွင် အချို့သော အစိုးရရုံး၊ ပုဂ္ဂလိက ရုံးများ ၊ စက်ရုံများ မှ လုပ်သားများ မဖြစ်မနေ အရေးတကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်ပိုဆင်းရသည် ။ ပိတ်ရက်များတွင် အချိန်ပိုဆင်းရမည့် လုပ်သားများအနေဖြင့် အချိန်ပိုကြေး နှစ်ဆရရှိမည်ဟုလည်း သိရသည် ။ အများစုသော အလုပ်များ ပိတ်သည့် နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရပ်တွင် ထမင်းချိုင့်ဆွဲ အလုပ်ဝင်နေရသည့် အချိန်ပို ၀န်ထမ်းများအား ကိုယ်ချင်းစာမိပါသည် ။
ရေပက်ကစားကြသော သင်္ကြန်ကာလတွင် လိုင်းကားများ ရှိသော်လည်း လမ်းပိတ်ခြင်း သာများပြီး နေရာတကာ ရေပက်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မည့်သူများ သွားလာရခက်ခဲခြင်းမျိုး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ကြရသည် ။ သို့သော် တာဝန်အရေးကြီးသည့်အတွက် မသွားမဖြစ် သွားရသည်ဟုသာ ကျမစိတ်ထဲ ယုံကြည်ထားခဲ့သည် ။
ယခုနှစ်တွင်တော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အလုပ်များမှ လုပ်သားများအား အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်သစ်ကူး ပိတ်ရက်ရှည်အတိုင်း မပိတ်တော့ပဲ … သက်မှတ်ရက်ထိ စောကာ အလုပ်ဆင်းစေကြောင်း သိရသည် ။ အချိန်ပိုကြေးမှာလည်း သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းအတိုင်း ၂ဆရသည်မဟုတ်ပဲ သာမန်အတိုင်းသာရကြောင်းသိရသည် ။ အလုပ်ရှင်များဘက်ကတော့ ရက်ရှည်ပိတ်ရက်မျိုးကို ကြိုက်ကြလိမ့်မည်မဟုတ် …. အချိန်ပိုကြေး ၂ဆ မပေးချင်သောကြောင့်သာ ပိတ်ခြင်းဖြစ်မည် ။ အချို့သော အလုပ်များတွင် နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်ကို ပိတ်ပေးသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ရက်မတိုင်ခင် အလုပ်ခွင် ပြန်ဝင်ရကြောင်းသိရသည် ။ တာဝန်ရှိသူများမှ သေချာစွာ မစိစစ်သဖြင့် အလုပ်ရှင်များ တနှစ်ထက်တနှစ်ပိုကာ အခွင့်ရေးယူနေကြသည် ။
ယခုနှစ်တွင်လည်း အချို့သော အလုပ်များမှာ သတ်မှတ်ထားသော ပိတ်ရက် မတိုင်မှီကပဲ စောစီးစွာ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် ကြေညာကြောင်း သိရသည် ….. ။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရသနည်း ….. ။ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိပါသလဲ ။ မည်သူကရော တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသလဲ … ။ အလုပ်ခွင် စောစီးစွာဝင်ခိုင်ခြင်း ၊ သတ်မှတ်ရက်ပြည့်မှီစွာ အားလပ်ရက်မပေးခြင်းကြောင့် နောက် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ရက်ရှည်မှာ ပပျောက်သွားပြီး အစောပိုင်းနှစ်များကဲ့သို့ ရေပက်ကစားကြသည့် ရက်များတွင်သာ အလုပ်ပိတ်သော ကာလတစ်ခု ပြန်ရောက်လာတော့မည်ဟု ထင်မိပါတော့သည် ။
မှန်ပါတယ်။ အလုပ်ကို စောပြီးပြန်ဆင်းခိုင်းတာမျိုးကို အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင် အလုပ်သမားဘက်မှတာဝန်ရှိသူတွေက ခေါင်းရှောင်မနေဘဲ အလုပ်ရှင်ကို ရှင်းပြပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွတ်ကျွတ်တွေ ..၀ါးနေပါတယ် ဗျို့ .. ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် … (ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ကြောင်ပုစွန်စား ၊ကြွတ်ကြွတ်ဝါးခြင်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါ ) :D
နောင်ငါးနှစ်အကြာတွင် ရွေးချယ်မည့် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း (ဇွတ်) လွှတ်မျှော် သဂျီးကိုယ်စား အကြောင်းပြန်လိုက်သည်။
သိဒယ်သိဒယ်…….. အဲ့ဒီလို အသံလေးကြားချင်လို့ :D
ကြားဖူးဒယ် လူ့ အခွင့်ရေး အလုပ်တမားအခွင့်အရေး ကျောင်းတားအခွင့်အရေး ဘာအရေး ညာအရေး …. ပေါ့ ကြားဖူးဒါနော် ဘာဂိုကြောဒါလဲ တေချာဒေါ့တိဝူး
မီးတို့ဆီမှာတော့ ဘယ်တော့မှ ရုံးပိတ်ရက်မရှိဘူး …
ပိုက်ဆံအပိုမရှိဘဲ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အချို့သောလူတန်းစားတွေက
သင်္ကြန်လိုရက်ရှည်ပိတ်ရင် ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် တွေးလို့ ပူရပါတယ်။
စလုံးက မြန်မာသံရုံးကတော့ မြန်မာသင်္ကြန်ဆိုလဲပိတ်.. တရုတ်နှစ်ကူးဆိုလဲပိတ်နဲ့.. ဟန်ကိုကျလို့.. ခေါစာသွားပစ် (အခွန်သွားဆောင်) မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က ရုံးပိတ်ရက်တွေကိုပါ သတိထားနေရတယ်..း(
ဆက်ကြေးပေးတယ်လို့ ပြောကြတာ.အခုတော့ ..ခေါစာသွားပစ်ဆိုပဲ..။
သူတို့ခမြာ… မှင်စာ နတ်ဆိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီ…။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ရှည် အတွင်း တိုင်းပြည်ရဲ့GDP ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးသလဲ ဆိုတာ နားလည်တဲ့
ပညာရှင်များ ရှိရင် ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ဆုံးရှုံးတာ မဆုံးရှုံးတာ စိတ်မ၀င်စားပါ … ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားချိန်မှာ ကစားပါ ၊ နားချိန်မှာ နားပါ ဆိုတာ မကြာဖူးဘူးလား ။ အဲ့ဒီလိုပဲ အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ လုပ်ပြီး နားရက်မှာ နားနေခွင့် ရသင့်တာပါ .. ။ တပတ်ကို 1ရက်ခွဲပဲ ပိတ်တာပါ … ဒါတောင် အိုဗာတိုင်းမ်ဆင်း ပါဆိုတာ တမျိုး … အပြင်ရောက်တော့မှ ပြန်လာခဲ့ပါ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာက တမျိုး …သေတော့မလို ဖြစ်နေပြီး ပြန်ခေါ်ခိုင်းနေတာ လူလည်း နွားရုပ်ပေါက်နေပြီ ။ စိတ်တွေ အရမ်းကြပ်လာလျှင် အလုပ်ထွက်လိုက်တော့မယ် … အဲ့ဒီအခါမှကိုယ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ အကုန်ဖျက်ခဲ့မယ် … မှတ်ပီလား လို့
ရှိတဲ့ဂျီဒီပီကို မေးတာလား၊ မရှိတဲ့ ဂျီဒီပီကို မေးတာလား တပ်မ၇၇ ရေ။ ရှိတဲ့ဂျီဒီပီကို မေးရင် မရှိဘူးဗျို့။ မရှိတဲ့ဂျီဒီပီကိုမေးရင် ဘီလီယံ ရာနဲ့ချီဆုံးရှုံးတယ်ဗျို့….
အဲဒီလောက်လည်း ..မတွက်ပါနဲ့ ကိုရင်နိဂိမိရယ်..။
လူဆိုတာက..တပါတ်မှာ ၂ရက်နား..။ တနှစ်မှာ ပိတ်ရက်ရှည်တခု ရသင့်ပါတယ်..။ ဒါကို အစိုးရတွေက ဖန်တီးလုပ်ပေးရတာပဲ..။
ဘယ်နှယ် ..အလုပ်ချည်းစွတ်လုပ်နေတော့ ..နိုင်ငံသားတွေ.. လူဖြစ်ရတာ ရှုံးမှာပေါ့…။
တကယ်တော့ .. ယူအက်စ်မှာ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်တချိူ့ပုဂ္ဂလိက အလုပ်တွေ ပိတ်ချင်မှပိတ်တာပါ..။
သူတို့ ကုမ္ပဏီ .. သူတို့လစာပေးရတာမို့ … သူတို့သဘောပါ..။
အလုပ်သမားမှာ.. ခွင့်ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်.. အဲဒီထဲက ဘောင်ဝင်နေရင်ပြီးတာပါပဲ..။
မြန်မာပြည်ပုံစံက… ကြည့်ရတာ.. အလုပ်သမားတွေ..၀န်ထမ်းတွေရဲ့ သမဂ္ဂလိုနေတာပါ..။
မကြာခင်မှာတော့.. စံနစ်တကျဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်လာမယ်ထင်မိပါတယ်..။
မီဒီယာတွေက ဘယ်လောက်ပဲ အော်အော် သူတို့က သောက်ရေးတောင် မလုပ်ဘူး သိသိကြီးနဲ့ ဇွတ်လုပ်နေကြတာ … သူတို့ စီးပွာဖြစ်ထွန်းဖို့ကိုပေ့ါ … ။ဟိုလူတွေကိုလည်း ရက်ရောထားတော့ ဘယ်သူမှ လူမိုက်ဝင်မလုပ်ဘူး ……..မုန်းတယ် ဒီနှစ် 3ရက်စောပြီး ရုံးတက်ရမယ်တဲ့ …
ပိတ်ရက်ဆိုတာ ဟန်ပြပဲ ရှိတယ် … စက်ရုံတွေက လိုက်မှ မလိုက်နာပဲ … ။ တကယ် စိတ်ပိန်တယ် .. ။
နွယ်ပင်တို့ အလုပ်ကတော့ ဒီနှစ် (10) ရက်လုံး ပိတ်မယ်တဲ့ (22) ရက်နေ့တော့ ပြန်တပ်ဖြစ်အောင်တက်ရမယ် ဘာဆင်ခြေမှ မလိုချင်ဘူး အလုပ်မတက်နိုင်လို့ကတော့ မှတ်လောက်အောင် ဒဏ်တပ်မယ်ဆိုပဲ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ပိတ်ရက်လေး ပိတ်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရတယ် ..
သင်္ကြန် ပိတ်ရက် အတွင်း အေးအေးဆေးဆေး အင်တာနက်ဆိုင် သွားမှာပါ။ ရေပက်တဲ့ရက် အတွင်း ဘယ်မှာ အင်တာနက်ဆိုင် ဖွင့်မလဲဗျို့။ သိရင်ပြောပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြိုနေ့ကစပိတ်ပြီးနှစ်ဆန်း(၂)ရက်မှာအလုပ်ပြန်ဆင်းခိုင်းထားပါတယ်။ ဆင်းရင်လစာ ၂ ဆ၊ မဆင်းရင်လဲ ရပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေက တော့ပျင်းလို့အလုပ်လာကြမယ်တဲ့။ ၂ ဆကြီးများတောင်ပေးရတော့မယ်။
အဲ့ဒါမျိုး ရွေးချယ်လို့ ရလျှင် တော်သေးတာပေါ့ … ။
သူများတွေက အေးဆေးနားချင်တာကို ။